IFTIINKACUSUB.COM: Waa maxay caqabadaha hortaagan guusha Jabhadda ONLF ?
Aduunyada aynu ku nool nahay maha mid ay ka dhamaato dhibta
iyo dagaaladu,waana shay dabiici iyo sunne u ah sida Ilahay Quraankiisa ku sheegay iyo Axadiista nabiga oo markasta inoo cadaynaysa in uu Aduunku yahay Daarti Dhibatada.
Hadaba dhibatooyinkaasi iyo dagaladaasi ayaa inta badan waxa ay ka yimadan amma ay ka asaasmaan iska hor-imaatin iyo is-fahan waa dhinacyo badanleh oo ka dhex abuurma,Dawlado,Gobollo iyo Qabaa'il meel wada dagan,kuwaasi oo markasta cadalad daro kala tirsanaaya.
Inkastoo aanay warbaahinta ku badnayn ,hadana waxaa jira dagaalo aan sidaasi u waynayn oo had iyo jeer ka dhexeeya dawlada Ethopiya iyo Jabhada lagu magacaabo "Ogaden National Liberation Front" (ONLF) amma sida ay dadka qaar u yaqanaan "Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya" (JWXO)
Intaa kaa dib Jabhaddu Waxa ay qabsatay shirwayne ay u dhan yihiin dhamaan dadkii iyo madaxdii tabacsanaa fikirka ONLF , shirkaas waxaa lagu qabtay Magaalada Garbo, shirkaasi wuxuu ahaa daah furkii ugu horeeyey ee siyaasadda ONLF ,shirkasi oo la odhan karo waxa uu ahaa mid go'amadii la isla qaatay ay ila hada caqabad ku yihiin ururka ,sida Magaca Ogadeeniya .Top of Form 2
Dadka dhalinyarada ah ee da'duudu u dhaxayso 18-30 jirku waxabay ku odhanayaan manan maqal jabhadaasi sheekhow.
Dadka da'dodu u dhaxayso 30-40 kuna waxa ay ku odhanayaan ,marmar ayaanu ka maqalna dawlad deeganka Somalida oo hadal haysa.
Dadka da'doodu u dhaxayso 40-70 kuna waxa ay hadal kugusoo gunanadayaan ,miyanay jabhadaasi wakhti hore Ethopiya la heshiin.